Tao anatin’ny tapa-bolana: basy sy bala marobe saron’ny polisy | NewsMada
Tao anatin’ny tapa-bolana: basy sy bala marobe saron’ny polisy
Manao tohivakana ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika tato ho ato, na teto an-drenivohitra izany na tany amin’ny faritra. Manoloana izany, nisy ny hetsika manokana nataon’ny polisim-pirenena, toy ny “Opération force de frappe, harcelements…Nahitam-bokany izany satria basy sy bala marobe indray tratra tao anatin’ny tapa-bolana…
Mirongatra ary lasa miha avolenta hatrany ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana amin’izao vanim-potoana izao noho ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana mahery vaika tonga eny am-pelatanan’ny jiolahy ary isan’ny mampirongatra ny tsy fandriampahalemana ny fiparitahan’ireny fitaovam-piadiana mahery vaika ireny. Misy, araka izany, ny ezaka nataon’ny polisim-pirenena amin’ny alalan’ireo hetsika manokana izay tafiditra ao anatin’ny asa andavanandron’izy ireo ny fikarohana ireny basy miparitaka ireny. Isan’ireo vina napetraky ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka rahateo ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana, indrindra ny hanaovana vaindohan-draharaha amin’ny fikarohana ireny basy mahery vaika tonga eny am-pelatanan’ny jiolahy ireny. Raha ny zava-nisy tao Toamasina, ny faramparan’ny volana aogositra lasa teo, ravan’ny polisy ireo tambajotran-jiolahy mpanao trafikana fitaovam-piadiana, nahitana mpividy sy mpivarotra. Tratra tao amina trano fandraisam-bahiny lehibe iray ao Toamasina ireo jiolahy niaraka tamin’ny basy Kalachnikov roa sy bala marobe nokasaina hamidy. Efa nahazo loharanom-baovao mialoha anefa ny polisy ka nandrasana fotsiny ny fotoana nifanomezan’ireo jiolahy, tamin’io fotoana io. Toy izany koa ny nahatrarana ireo olona miisa 11, tompon’antoka tamina fanafihana namoizana ain’olona tao Antsirabe. Saron’ny polisy niaraka tamin’ireo jiolahy ny basy Kalachnikov iray miaraka amin’ny bala, niampy ireo basy PA vita gasy niaraka tamin’ny bala. Olona iray koa voasambotry ny polisy tao Fianarantsoa, ny talata 4 septambra lasa teo noho ny fahatrarana basy vita gasy sy balana Kalachnikov roa. Niainga tao amin’ny Camp Robin hihazo an’i Fianarantsoa ity lehilahy iray ity, nitondra ireo fitaovam-piadiana ireo. Teny an-dalana hiditra an’i Fianarantsoa no voasakan’ny polisy ilay taksiborosy ka hita tao anaty entany nandritra ny fisavana ireo fitaovam-piadiana ireo. Loharanom-baovao no nahafahan’ny polisy nanao ny fisavana ny taksiborosy nandehanany ka izao noraisim-potsiny izao ity lehilahy ity. Niaiky izy fa azy tokoa ilay basy ka tamin’izany no nilazany fa tany Mananjary no nahazoany io basy io.
Miara-dalana hatrany ny jiolahy sy ny zava-mahadomelina…
Isan’ny fototry ny tsy fandriampahalemana koa ny fihanaky ny mpanao trafikana zava-mahadomelina ka anaovan’ny polisy hetsika manokana. Miara-dia tsy afa-misaraka hatrany rahateo koa ny asan-jiolahy sy ny zava-mahadomelina satria maka “ody risika” (araka ny fitenin’ireo jiolahy azy) ry zalahy mialoha ny hanaovan’izy ireo ny asa ratsiny. Nahitam-bokany izany, ny aogositra sy ny septambra lasa teo tamin’ny fahatraran’ny polisy miady amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina rongony milanja 300 kg teny Alakamisy Fenoarivo izay nokasaina haparitaka teto an-drenivohitra. Noraisim-potsiny teo am-piotazana tao Fianarantsoa ny olona roa, ny talata teo. Niainga avy amin’ny loharanom-baovao hatrany ny polisy ka tamin’izany no nahalalana fa misy olona mamboly rongony ao Fianarantsoa. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy ka mbola teo am-piotazana ireo rongony ireo izy roa lahy. Miisa 100 fototra ny rongony hita tao amin’io toerana fambolena rongony io. Farany teo, ilay teratany nizerianina nahatrarana heroine sy cocaïne tamina grama maromaro teny Ivandry taorian’ny vela-pandrika nataon’ny polisy.
Nolazain’ny polisy fa heroine sy cocaïne maro no tokony ho tratra niaraka tamin’ity teratany nizerianina ity, saingy tafaporitsaka ny teratany nizerianina namany nitondra ireo zava-mahadomelina sasany.
Mikaroka ireo fandikan-dalàna hafa koa ny polisy…
Tsy mijanona amin’ny fanenjehana olon-dratsy fotsiny ny polisy fa mikaroka koa ireo karazana fandikan-dalàna hafa, toy ny famarinana olona na fanondranana an-tsokosoko olona mankany ivelany, araka ny fahafantaran’ny olon-drehetra azy. Saron’ny polisy, ny 27 aogositra teo ny olona dimy ao anatina tambajotra mpandefa an-tsokosoko vehivavy any Sina. Nampanantenaina asa ireo tovovavy ireo ary nolazaina mihitsy aza fa tsara karama. Samy manana ny andraikitr’asany avy ireo olona anatin’ilay tambajotra : misy mikarakara ny taratasy eny amin’ny kaominina entina hampitomboana ny taonan’ireo ankizivavy tsy ampy taona, ny hafa kosa mikarakara ny pasipaoro sy ny Visa ho any Sina. Fahadisoam-panantenana bevata anefa no hitan’ireo tovovavy rehefa tonga any Sina fa tsy nisy araka ny nifanarahana akory ilay asa fa namidy sy noterana hanambady lehilahy Sinoa izy ireo. Vola mitentina 70 tapitrisa Ar ka hatramin’ny 160 tapitrisa Ar isan’olona ny vola azon’ireo mpivarotra olona ao anatin’ity tambajotra ity. Nohamafisin’ny polisy hatrany moa fa teratany malagasy ihany no mpandray sy mivarotra ireo tovovavy ireo any Sina ary mbola any Sina ireo vehivavy malagasy mpivarotra olona ireo.
Polisim-pirenena sy ny fanajana ny zon’olombelona
Iray amin’ireo vina napetraky ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka ny fanajana ny zon’olombelona mba hahamendrika hatrany ny polisim-pirenena eo amin’ny fiatrehan’izy ireo ny asany. Nisy ny vela-kevitra manokana nataon’ny sampandraharaha misahana ny filaminam-bahoaka miaraka amin’ireo sampandraharaha rehetra misy ao aminy, teo anoloan’ireo lehibe eo anivon’ny polisim-pirenena. Ny talen’ny Filaminam-bahoaka, ny Commissaire Divisionnaire de police, Rakotoarimanana Herilala no nitarika izany tamin’ny fomba ofisialy, nifantoka tamin’ny hoe : “Polisy an-drenivohitra akaiky ny vahoaka, manaja ny maha olona ary fitaratra ho an’ny polisim-pirenena” ny lohahevitra nifantohan’ity vela-kevitra ity. Tsy ny resaka fandriampahalemana ihany no nomen-danja tao anatin’izany fa eo hany koa ny polisy eto an-drenivohitra, ho sahy hijoro amin’ny maha izy azy. Toy ny : polisy an-drenivohitra mahay sy mahafehy ny asany amin’ny fananana traikefa sy fifehezan-tena ary fandraisana andraikitra. Polisy manakaiky hatrany ny vahoaka amin’ny alalan’ny fanentanana sy fampianarana ary fiaraha-miasa amin’ny vahoaka, indrindra amin’ny lafiny fandriampahalemana. Polisy manaja ny maha olona, amin’ny fahaizana mandray sy tsy manavakavaka ireo olona mandraharaha eny anivon’ny sehatra hiasan’ny polisim-pirenena. Polisy an-drenivohitra fitaratra ho an’ny polisim-pirenena amin’ny fanomezana endrika tsara amin’ny fanajana ny zon’olombelona sy ny lalàna velona.
Nangonin’i Jean Claude